काठमाडौ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाका कारण मंसिरको अन्तिम साता खोल्ने तयारी गरिएको लोकसेवाको परीक्षा तत्काल नखुल्ने भएको छ । अब समायोजन प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया खुल्नेछ । समायोजनपछि मात्रै..
शिक्षक सेवा आयोगले प्रा वि तहको शिक्षकको नतिजा प्रकाशित गर्यो (शिक्षकको नामावली सहित)
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले गत असार ३० गते लिएको अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन थालेको छ । अघिल्लो सोमबार सुरु गरेको नतिजा प्रकाशन बुधबार पनि जारी रहेको छ प्राथमिक तहको झापा,..
बहुमुल्य तथा दुर्लभ एकमुखे रुद्राक्ष र नागमणि प्रदर्शन
काठमाडौं । बालाचतुर्दशीका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा बिहान ८ बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म दुर्लभ एकमुखे रुद्राक्ष र नागमणि प्रदर्शनीमा राखिएको छ । बहुमूल्य यी सामग्री प्रत्येक वर्ष बालाचतुर्दशीका अवसरमा मार्गशीर्ष कृष्ण..
शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको शिक्षकको नतिजा प्रकाशित गर्यो (शिक्षकको नामावली सहित)
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले गत असार ३० गते लिएको अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन थालेको छ । अघिल्लो सोमबार सुरु गरेको नतिजा प्रकाशन मंगलबार पनि जारी रहेको छ प्राथमिक तहको ताप्लेजुङ..
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत, १ लाख ९ हजार कर्मचारीको समायोजन हुने
काठमाडौं। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण र पेचिलो विषयको रुपमा रहेको बहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । सोमबार राती सिहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी..
आज मा बि तहको शिक्षकको अंग्रेजी विषयको नतिजा प्रकाशित
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन थालेको छ । सोमबार सुरु गरेको नतिजा प्रकाशन सोमबार पनि जारी रहेको छ माध्यमिक तहको अंग्रेजी विषयको पूर्वामाञ्चाल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र..
तामझाम सहित शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा ६७ रोजगार सुचिकृत, को भयो पहिलो ?
Posted on Dec 02 2018
काठमाडौं । सरकारले हालै तामझामका साथ शुभारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म ६७ रोजगार सुचिकृत भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्तिक २६..
आज मा बि तहको विज्ञान र गणित विषयको नतिजा प्रकाशित (शिक्षकको नामावली सहित)
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन थालेको छ । सोमबार सुरु गरेको नतिजा प्रकाशन आईतबार पनि जारी रहेको छ आयोगले आज माध्यमिक तहको पुर्वामाञ्चल, मध्यमाञ्चल विज्ञान विषयको नतिजा..
आज मा.बि. तहको शिक्षकहरुको विज्ञान, सामाजिक लगायत विषयको नतिजा प्रकाशित (शिक्षकको नामावली सहित)
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन थालेको छ । सोमबार सुरु गरेको नतिजा प्रकाशन शनिबार पनि जारी रहेको छ आयोगले आज माध्यमिक तहको पुर्वामाञ्चल, मध्यमाञ्चल पश्चिमाञ्चलको सामाजिक विषयको..
अस्थायी शिक्षकको निम्न माध्यमिक तहको सामाजिक विषयको नतिजा प्रकाशित (शिक्षकको नामावली सहित)
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन थालेको छ । सोमबार सुरु गरेको नतिजा प्रकाशन शुक्रबार पनि जारी रहेको छ आयोगले आज निम्न माध्यमिक तहको पुर्वामाञ्चल, मध्यमाञ्चल को सामाजिक..
अस्थायी शिक्षकको माध्यमिक तहको नतिजा प्रकाशित (उर्तिण शिक्षकको नामावली सहित)
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन थालेको छ । सोमबार सुरु गरेको नतिजा प्रकाशन शुक्रबार पनि जारी रहेको छ आयोगले आज माध्यमिक तहको पुर्वामाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिम, मध्यपश्चिममाञ्चल र..
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा यी उम्मेदवारको भयो जागिर पक्का, नियुक्ती पत्र लिन बोलायो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन अनुसार लिखित र अन्तर्वार्तामा सहभागि भई उत्तीर्ण भएका निम्न उम्मेदवारलाई नियुक्ती पत्र लिनका लागि बोलाइएको छ । सूची हेर्नुहोस्ः सूची हेर्नुहोस्ः ..
नेपाल बैंकले सहायक प्रबन्धक छैटौ तहको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक (उर्तिणको नामवलीसहित)
नेपाल बैंकले सहायक प्रबन्धक छैटौ तहको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक (उर्तिणको नामवलीसहित) ..
अस्थायी शिक्षकको सामाजिक र नेपाली विषयको नतिजा प्रकशित (शिक्षकको नामावली सहित)
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन थालेको छ । सोमबार सुरु गरेको नतिजा प्रकाशन विहिबार पनि जारी रहेको छ आयोगले आज निम्न माध्यमिक तहको पुर्वामाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिम, मध्यपश्चिममाञ्चल..
नेपाल र कम्बोडियाबीच आज हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने
काठमाडौं । नेपाल र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक कम्बोडियाबीच हवाई सेवा आदानप्रदान गर्न प्रारम्भिक चरणको सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर हुने भएको हो। नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका कम्बोडियाका प्रधानममन्त्री हुन सेन र प्रधानमन्त्री केपी..
शिक्षा सेवा आयोगले अंग्रेजी विषयको नतिजा प्रकशित गर्यो (सूचिसहित)
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन थालेको छ । सोमबार सुरु गरेको नतिजा प्रकाशन बुधबार पनि जारी रहेको छ आयोगले आज बुधबार निम्न माध्यमिक तहको पुर्वामाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिम,..
बैंक तथा बीमा कम्पनीमा ४५० कर्मचारी माग, एनआइसी, एनएलआइसी, मेगा र एनबीमा जागिर अबसर
काठमाडौं। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनआर्इसी एशिया बैंक, मेगा बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकले ४५० जनाभन्दा धेरै कर्मचारी माग गरेका छन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले केही संख्यामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट माग गरेको छ।..
शिक्षा सेवा आयोगले प्रकशित गर्यो दोस्रो चरणको अस्थायी शिक्षकको नतिजा (सूचिसहित)
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन थालेको छ । सोमबार सुरु गरेको नतिजा प्रकाशन मंगलबार पनि जारी रहेको छ । आयोगले मंगलबार निम्न माध्यमिक तहको पश्चिम, मध्यपश्चिममाञ्चल..
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि’ २०७५ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान..
आजबाट सबै श्रमिकलाई पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु, के के छन् सुरक्षा योजना
काठमाडौं । सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई लागू हुने गरी पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्दै छ । काठमाडौंस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा..
शिक्षक सेवा आयोगबाट लिईएको अस्थायी शिक्षकको नतिजा सार्वजनिक, नामावली सहित
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगबाट गत असार २९ गते लिईएको स्थायी पदपुर्ति परिक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ । उक्त परिक्षामा सामेलभएका अस्थायी शिक्षकहरु मध्य निम्नमाध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको गणित र..
वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाजले दैनिक १६ घण्टा उडाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरीद प्रक्रियाको अनियमितबारे सर्बत्र चर्चा पाइरहेका बेला निगम स्वयंले भने आन्तरिक व्यवस्थापन र सेवा सुदृढीकरणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएको जनाएको छ..
जापानले नेपाली १ हजार जना आइटी इन्जिनियर लैजाने
काठमाडौं । जापानको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गदैं आएको ह्युमन रिसोसिया कम्पनीले नेपालका ३ वटा कलेजबाट दक्ष कामदारका रूपमा नेपाली आइटी इन्जिनियरलाई रोजगारीमा लैजाने भएको छ । कम्पनीले नेपालको इन्जिनियरिङ अध्ययन..
सेनामा झण्डै ३८ सय संख्यामा भर्ना खुल्यो, सुचना सहित
काठमाडौं । नेपाली सेनाले झण्डै ३ हजार ८ सय संख्यामा भर्ना आह्वान गरेको छ । लेखा जमदार, अमलदार, सैनिकदेखि केशकर्तकसम्मका पदहरुमा भर्ना खुलेको हो । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी..
वाइड बडी खरीद प्रकरणः ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला, कमिशन बापतको रकम कहाँ गयो ?
काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगम र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई वाइड बडी विमान खरीद प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता सम्बन्धमा प्रश्न गरेको छ । समितिको..
नेपाललाई नेशनल ज्योग्राफीको एडभेन्चर्स रेष्ट अवार्ड
काठमाण्डौं । नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटीले नेपाललाई वेष्ट ट्राभलर्स अवार्ड २०१८ बाट सम्मान गरेको छ । रुससँगै कमनवेल्थ राष्ट्रमा आवद्ध १२ देशका पाठकले विश्वभरको विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यबारे दिएको मतको आधारमा नेपालले ‘एडभेन्चर्स..
न्याय सेवामा १३ सय ३९ को नयाँ दरबन्दी स्वीकृतः यसै वर्ष ४२४ जनाले रोजगारी पाउने
काठमाडौँ । न्याय सेवामा एकैपटक एक हजार ३३९ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको संगठन संरचना तथा दरबन्दी प्रस्ताव मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो। स्वीकृत दरबन्दी तीन..
विदेशबाट फर्किएकालाई १० लाखसम्म ऋण दिन दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । भर्खरै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनु भएको छ? केही ब्यापार, व्यवसाय र इलम गर्नेबारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने सरकारलाई सूचना दिनुस् । योग्यता पुगेमा १० लाखसम्म सहुलियत ब्याजको ऋण पाउनुहुनेछ । वैदेशिक..
अब ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र, ७५३ अधिकृत अस्थायी नियुक्त गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले देशका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको तथ्यांक संकलनसँगै रोजगारी व्यवस्थापन थाल्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकबाट ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा..
पहिरोले बडिगाड खोला थुनिएर बनेको कृतिम तालमा पर्यटक आकर्षण गर्न र्‍याफ्टिङ सुरु
बाग्लुङ । पहिरोले बडिगाड खोला थुनिएर बनेको कृतिम तालमा पर्यटक आकर्षण गर्न र्‍याफ्टिङ सुरु गरिएको छ । ताल हेर्न आन्तरिक पर्यटकको लर्को नै लागेपछि बडिगाड गाउँपालिकाको पहलमा आइतबारबाट र्‍याफ्टिङ सुरु..
Results 878: You are at page 12 of 30